Udliwano-ndlebe noJack Dangermond - Geofumadas
NgoJulayi, 2008 ArcGIS-ESRI, ezintsha
Xa sihlala iintsuku ezimbalwa kude nkomfa yomsebenzisi ESRI, apha siguqula kubo udliwano-ndlebe kunye uJack Dangermond phambi kwethu sinokulindela ukusuka ArcGIS 9.4.
Ziziphi izicwangciso ezine-version elandelayo ye-ArcGIS 9.3?
Inguqulo elandelayo ye-ArcGIS (9.4) iya kugxila kule miba emine elandelayo:
I zicelo zo shishino
Qhubeka ukuze lokwandisa izakhono Umncedisi ArcGIS malunga amaqonga, scalability kunye nokhuseleko ngokugxininisa UNIX / Linux kunye Java ubunakho inkxaso, iimephu onamandla, nenkxaso ahlanganiswe kwizicelo Internet (Flex), kwakhona Umncedisi Tracking into .
Uphuhliso lwabaqeqeshi be-ArcGIS
Nciphisa amava omsebenzisi, uhlalutye inkqubo yokugeleza ukunyusa umkhiqizo, kwaye ukhuthaze ukubambisana ngolwazi ngolwazi ngokulula. Kukho ukucwangciswa okucwangcisiweyo kwimimandla yohlobo oluphambili, uhlalutyo lwe-4D kunye nokubonakalisa, ukubhala imephu, iimpawu ezingezizo zendawo kunye neempawu zesikhashana, phakathi kwabanye.
Vumela ukuphuhliswa kwezicelo ze-geospatial ukuthunyelwa ngokukhawuleza. Ukwakhiwa kwamandla amatsha kwi-ArcGIS 9.3, ukukhululwa okulandelayo kuya kuqhubeka nokwandisa ukusebenza ngokukhawuleza kwaye kwangoko kufake izicelo zokusebenza. Kwi-ArcGIS Explorer, ukujonga okutsha kwi-interface yomsebenzisi, ukuhlanganiswa kwe-2D kunye ne-3D, kunye neenkcukacha zokubambisana ezicwangcisiweyo zicwangcisiwe. Kwi-ArcGIS kwi-intanethi, ukuphucula kufaka iindlela kunye nokuhamba, kunye nenkxaso ye-GPS kwinqanaba elithile lobugcisa.
Isisombululo se-GIS kubasebenzisi boshishino
I-ArcGIS 9.4 iya kwandisa izisombululo ezihambisa isethi yezicelo zezoshishino kunye nezinto zokusebenza. Nge-suite ye-Business Analyst, i-Business Analyst Online iya kuthunyelwa kwi-platform ye-Business Analyst Server. Isisombululo sezinto zokusebenza (ArcLogistics), i-Network Analyst kunye ne-StreetMap Mobile nazo zicwangciswe.
I-ESRI iya kunika nini iilayisenisi ukuba zisetyenziselwe ukuxhunyezwa kwiMphathi weLayisense yeMkhulu?
ArcGIS 9.4 iza kuxhasa ubuchule "khangela phandle" mvume uze ukuzise kwintsimi ukugcina baphola central server mvume.
Ngaba ucinga ukukhipha indlela yokukhusela ilayisenisi ye-dongle?
Ewe kwelinye leepakethi zesevisi (post 9.3), i-ESRI iya kwamkela amandla okusebenzisa umphathi welayisenisi ngaphandle kwe-dongle, kwi-Windows kunye ne-Linux
Uya kuphumeza nini umhleli weemethadatha kwiArcCatalog editor?
Siza kuhlengahlengisa umhleli weemethadatha njengenxalenye yeziphakamiso zethu kwi-ArcGIS 9.4 kokubili ukudalwa nokusingatha nokwabelana ngemethadatha.
Kutheni i-ESRI igxininisa kakhulu kwi-ArcGIS Server?
Impendulo elula kukuba siyabona ukuba iinkonzo ze-geospatial kunye ne-teknoloji esekelwe kwiseva yenye yeyona ndlela iphawulekayo kumashishini ethu. I-ArcGIS Server yicinga elifanelekileyo kwiiplatifti ze-GIS ziseva kunye nanjengoko le nto ibandakanya ukusebenza okuphezulu kumaphu ewebhu, sifuna ukuphunyezwa kweenkonzo ukusuka kuyo yonke imisebenzi ye-ArcGIS kunye nezixhobo.
Indawo yeseva yendawo yeseva isekela isethi ephuculweyo yeenkonzo zewebhu "ngaphandle kwebhokisi" (umz., Iimephu ze-raster ezigcinwe kuyo, iinkonzo zebhaluni ze-3D, i-geoprocessing, njl). Ikwasebenza kunye nokugcinwa kwabathengi bewebhu kunye neziphequluli, i-geo-navigators kunye neendawo ezihambahambayo, ngokuqinisekileyo nakwiindawo zendalo zedesktop.
Ngokuhamba kwexesha, sikholelwa ukuba ubuchwepheshe bee-GIS buza kuza kuphucula iiplatifti zabasebenzisi bethu. Ibenza ukuba benze umsebenzi wabo bhetele kwaye usebenze ngokufanelekileyo kwaye uphinde uququzelele ukuphuhliswa kwe-GIS ukunyusa inani labasebenzisi.
Ngaba i-ESRI iya kunika inkxaso yeFlex kwi-ArcGIS Server?
Nge-ArcGIS API yeFlex, unjiniyela unoku:
Bonisa imephu esebenzayo kunye nedatha yakho
Qalisa imodeli ye-GIS kumncedisi kunye nokubonisa iziphumo
Bonisa idatha yakho kwibalazwe yase-ArcGIS kwi-intanethi
Iziphumo zophando kwi-data ye-GIS kunye neziphumo zokubonisa
Yenza i-mashups (hlanganisa ulwazi kwiimithombo ezininzi zewebhu)
Jonga indlela iSixeko saseBoston sisisebenzisa ngayo i-ArcGIS API yeFrex kwiisicelo zayo zeSolar Boston
Ekuqaleni, i-ArcGIS API yeFlex iya kuba ne-beta version. Intlanganiso ekhethekileyo kunye neqela lamaqela anomdla kwi-Adobe Flex ijoliswe ngo-Agasti 5, kuya kuba semini kwigumbi le-15A SDCC.
Yiyiphi incomo ye-ESRI yokusetyenziswa lula kwezixhobo zokuhlela (ukubuyisela kwakhona)?
Nangona kukho inani lezithathu zenkampani eziye zazakhela izixhobo zokuhlela kwi-ArcGIS, kukho izicombululo ezine "ezilungiselelwe ibhokisi" ezifumaneka kubasebenzisi be-ESRI:
I-Desktop ye-ArcGIS isebenzisa ukuhlela kwedatha ngaphakathi kwe-geodatabase kunye ne-Microsoft "inkino" yobuchwepheshe
I-ArcReader enekhono lokubuyisela kwakhona
I-ArcPad enekhono lokukhangela
Ukuhlelwa kweWebMap kunye neendwangu zokukhawuleza
Kwi-ArcGIS 9.4, i-ESRI ilungiselela ukufaka izixhobo ezongezelelweyo ukuvumela ukwabelana kwamanqaku kunye nokuhamba.
Ngaba i-ArcPad ingavumelanisa ngqo ne-geodatabase?
Ewe, ngeArpPad 7.2, ekhoyo kwi-beta version kwiinkomfa zomsebenzisi, iiklasi zenkalo kunye neetafile ezihambelanayo zingashicilelwa ngqo kwi-geodatabase nge-ArcGIS Server. Iinguqu kuloo nguqu zinokuthi zihambelane ngqo kunye nabasebenzisi abaningana be-ArcPad.
Ngaba baya kuxhasa iArcView GIS 3.x kwi-Microsoft Windows Vista?
Ayikho ngenxa yokuba utshintsho kwi-Windows Vista iteknoloji ayikwazi ukuxhaswa kwi-ArcView 3.x. I-ArcView 3.3 iya kuqhubeka kunye nenkxaso kwi-Windows XP, nangona asiyi kubonelela ngokuhlaziywa okanye utshintsho.
Yintoni eyenziwa ngu-ESRI ukuphumeza umgangatho kunye nokuzinza kwesoftware?
Uhlobo lwe-9.3 lwe-ArcGIS ludibene neemfuno ezininzi zeempawu, nangona kunjalo, sisadingeka ukwenza utshintsho. Utshintsho kwinguqu ye-9.3 iya kudibaniswa kwiinguqulelo ezilandelayo zepakethi yesevisi. Ukugxila kwethu kumgangatho kuya kuba kwezi zinto:
Ukuphendula ngokukhawuleza kwi-reque
Uhlaziyo lwexesha elikhoyo lweepakethe zenkonzo (nganye iinyanga ze-3-4)
Ukuhlanganiswa kweqela le-ESRI nenkxaso yophuhliso lobuchwepheshe
Ulwazi olulungileyo malunga nemigangatho esemgangathweni epapashwe kwiwebhu (amanqaku esiseko solwazi, uludwe lweentlobo eziguqulwayo, njl.).
Siya kuqhubeka sigxininise ekuphunyezweni komgangatho we-software yethu: ukufakela, ukusebenzisa izicelo, amaxwebhu, ingxelo yokuphutha kunye nokusabalalisa. Inkqubo yethu yokuphucula ijolise ekuqinisekiseni umgangatho ophezulu kunye neepakethe zenkonzo zeArgGIS ze-9.3 ezilandelayo.
Yintoni eyenziwa yi-ESRI kunye nendawo yeFlex? Ngaba oku kuya kuba yinxalenye yemveliso kwikamva?
I-ESRI iye yaphuhlisa, njengenxalenye ye-ArcGIS Server 9.3, i-API epheleleyo yokwakha izicelo ze-Inthanethi nge-Flex. Lo mhlaba unikeza ithuba elinamandla kubasebenzisi bethu ukwakha i-interfaces yokusebenzisana kakhulu phakathi kwezicelo zabo zewebhu.
I-ArcGIS API ye-Flex iya kufumaneka njengokukhuphela mahala kwiziko leMithombo yeeNkonzo ze-ArcGIS. I-ESRI iya kwenza le API kawonkewonke ngexesha leNkomfa yabasebenzisi. Ukuze ufunde kabanzi, tyelela iqela elinomdla kwi-Adobe Flex i-5 ka-Agasti ngemini ye-5 ka-Agasti kwikamelo le-15A SDC.
Post edlulileyo«Edlulileyo Qhagamshelana noMhlaba oyiNtlabathi kunye ne-ArcGIS 9.3
Post Next Ukupapasha iinkonzo ze-OGC kwi-GvSIGOkulandelayo "